सायद २ को व्यापार निकै कमजोरFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
सायद २ को व्यापार निकै कमजोर
फिल्मी फण्डा । चलचित्र सायद २ यहि शुक्रवार बाट नेपालभर प्रदर्शनमा आएका चलचित्र हुन् । चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु सँग प्रदर्शन भएको सायद २ ले बक्स अफिसमा भने खासै असर पार्न सकेन । चलचित्रले शुरुवाट दिनमा मात्र ३५ प्रतिशतको अकुपेन्सि कायम गरेको छ । चलचित्रका निर्माण टिमले सायद २ को व्यापारलाई सुखद ओपनिङ भनिएको छ । तर सायद २ को व्यापार भने त्यस्तो देखिएन । सायद २ फिल्मले सायद भन्दा राम्र्रो व्यापार गर्ने अुमान निर्माण टिमको थियो तर त्यसो हुन सकेन । निर्माता सुनिल रावलका अनुसार उनले दावीका साथ सबै हल हाउसफुल भनिएता पनि अधिकांश हलहरुको रिपोर्ट बुझ्दा व्यापार औसत मात्रै रहेको बताएका छन् । म यस्तो गीत गाउँछुले सिंगल थिएटरका सबै हलहरु कब्जा गरेको छ ।
जस कारण सायदले सानो हलहरुमा चित्त बुझाउनु परेको छ । सिंगल थिएटरमा सायद २ को व्यापार निकै सुस्त छ भने मल्टिप्लेक्समा पनि औसत मात्रै रहेको छ । दोश्रो दिन अर्थात शनिवार पनि सायद २ को व्यापार सुस्त भईरहेको छ । शनिवार सायद २ को व्यापार ४० प्रतिशत अकुपेन्सि अनुमान गरिएको छ । सायद २ प्रदर्शन भएका राजधानीका अधिकांश हलहरुमा व्यापार त्यति राम्रो देखिदैन भने राजधानी बाहिर पनि सायद २ को व्यापार निकै कमजोर रहेको वितरक कम्पनि एफ डि ले जानकारी गराईएको छ ।
सायदकोे पहिलो भागलाई युवापुस्ताका दर्शकहरुले निकै रुचाएका थिए । तर त्यसको अनुरुप सायद २ लाई दर्शकले साथ दिन सकेन । फिल्ममा सुशील श्रेष्ठ, निशा कार्की, स्यारोन श्रेष्ठ, अमृत ढुङ्गाना, कुशल पाण्डे तथा निर्माता सुनिल रावलको समेत अभिनय छ । अमृत श्रेष्ठको अभिनय निकै बलियो छ भने शुशिल श्रेष्ठको अभिनय निकै कमजोर देखिन्छ ।
पुष्पराज न्यौपानेले निर्देशन गरेको फिल्ममा सुनिलसँग ईश्वर श्रेष्ठ र सुवास लामिछाने निर्माणमा सहकाय गरेका छन् ।
कोरोनाबाट निर्देशक चेतन कार्कीको निधन
हास्य कलाकार शिवहरी पौडेललाई कोरोना पुष्टि
कोरोनाका कारण रोकियो ‘प्रेमगञ्ज’को सुटिङ
गायक प्रकाश सपूत कोरोना संक्रमण मुक्त
अभिनेता टी नरसिंम्हाको कोरोनाबाट निधन
सकियो निफ, हेर्नुहोस् क–कसले पायो अवार्ड ?
सोनिया र सुधीरको ‘अङ्ग्रेजीमा बनाना’मा रोमान्स (भिडियो)
देव र बर्षाको ‘मर्छु होला'(भिडियो)
सुरक्षित रहन के गर्ने ? पुजा सुनारको ‘सबले जानौ है'(भिडियो)
गौरव र उत्साहाको ‘जसले मलाई’ (भिडियो)
शिल्पा पोखरेलको भोजपुरी फिल्म ‘प्रेमगीत २’को ट्रेलर सार्वजनिक(भिडियो)
उषा उप्रेती र डिमोन क्षेत्रीको ‘माया’मा रोमान्स (भिडियो)